देशकै पहिलो हुने लक्ष्यका साथ हतियार संकलन अभियानमा ताप्लेजुङ प्रहरी – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
देशकै पहिलो हुने लक्ष्यका साथ हतियार संकलन अभियानमा ताप्लेजुङ प्रहरी
ताप्लेजुङ, ५ जेठ, २०७६ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) ताप्लेजुङले अहिले सम्म १ सय ७० थान हतियार संकलन भएको छ । हतियार संकलनमा नेपालकै पहिलो हुने लक्ष्यका साथ चलाएको अभियानका क्रममा यी हतियार संकलन गरिएको जिप्रका ताप्लेजुङले जनाएको छ ।
प्रहरीले यो अभियानका क्रममा पछिल्लो २५ दिनमा ४५ थान हतियार संकलन गरेको छ । यसअघि गत वैशाख १० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत १ सय २५ थान हतियार संकलन भएको जानकारी दिएको थियो । उतिबेला यो परिमाणको संकलित हतियार १ नं. प्रदेशभरीमै सबैभन्दा बढि थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाका अनुसार प्रहरीले अहिले अवैध हतियारको खोजी तथा इजाजत प्राप्त हतियारसमेतको सुरक्षित भण्डारण अभियानका क्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष टोली नै परिचालित गरेको छ । प्रहरीको साथमा रहेमा इजाजत प्राप्त हतियारसमेतको भरपर्दो सुरक्षा हुने ठानेरै कतिपय हतियारधनीले स्वस्फूर्त रुपले हामीलाई बुझाउनु भएको छ’ थापाले भने ।
अवैध हतियार भने प्रहरीले जफत गर्ने गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले ताप्लेजुङ भरमा ३ सय थान इजाजत प्राप्त र ३ सय थान अवैध हतियार रहेको अनुमान लगाएको छ । घरेलु हातहतियार संकलन गर्नेगरी २०७५ साल चैत १ गते जारी भएको सूचनापछि ताप्लेजुङ प्रहरीले हतियार संकलनलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अभियान थालेको हो । ‘न्यूनतम् पनि २ सय थान हतियार संकलन गर्नेगरी लक्ष्य बनाएर काम गरिरहेका छौं’ प्रनाउ थापाले भने । उनले यो अभियानमा साथ दिएर अपराध नियन्त्रण तथा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षा कार्यमा सहयोग गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतलाई थापाले आग्रह गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: 2019-05-19 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged प्रहरी ताप्लेजुङ हतियार सङ्कलन
फेसबुके भद्दा शुभकामना !
गुर्जामा विदेशी पाहुनाको लागि स्नानगृह
Tags: प्रहरी ताप्लेजुङ, हतियार सङ्कलन